मुख्यमन्त्री राउतले सोधे, ‘प्रदेश २ विदेशी भूमी हो ?’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:२२ English
मुख्यमन्त्री राउतले सोधे, ‘प्रदेश २ विदेशी भूमी हो ?’
जनकपुर, २४ कार्तिक । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २ नम्बर प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफू मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशले देशभित्रकै परदेशको ब्यवहार भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । जनकपुरधाममा जारी साहित्यिक महोत्सवको ‘प्रदेश र परदेश’ सत्रमा मुख्यमन्त्री राउतले ‘के यो भूमि विदेश हो ? म विदेशबाट आएर मुख्यमन्त्री बनेको हुँ ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले आफूले देशभित्रकै एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँ भन्ने अनुभूत गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘अरु मुख्यमन्त्रीलाई विदेश जान दिने, मलाई नदिने किन ?’ उनले फेरि प्रश्न गरे । समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा संघीयता नचाहनेहरु पुगेका कारण यस्ता जटिलता देखिएका हुन् ।’
२४ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:२६ मा प्रकाशित